Xiaomi Mi Note 10 waxaa lagu soo bandhigayaa Nofeembar 14 gudaha Poland | Androidsis
Maalmo ka hor jiritaanka Xiaomi Mi Note 10 ayaa la xaqiijiyay. Taleefankan cusub ee ka imanaya magaca Shiinaha wuxuu ballan-qaadayaa inuu noqon doono mid ka mid ah halyeeyada ku dhex jira wax yar ka hor. Xaqiijinta jiritaankeeda, sumadda ayaa ku dhawaaqday taleefankan Waxaan doonayay in aan imaado suuqa waxyar. In kasta oo aan la siinin taariikho. Nasiib wanaag, waxaan aakhirkii helnay taariikho.
Maaddaama taleefanku soo gaari doono Yurub toddobaadyo gudahood. Uguyaraan taas waan ognahay tan Xiaomi Mi Note 10 waxay ku yeelan doontaa bandhig Poland, kaas oo kuu noqon kara hordhac kuu ah suuqa Yurub. Hordhac muhiim ah, gaar ahaan kamaradaha uu taleefankani soo bandhigayo.
Xaaladda dhacdadan Poland, maahan inaan sugno waqti dheer. Waxay noqon doontaa Nofeembar 14 markii la soo bandhigo ayuu yiri Xiaomi Mi Note 10 si rasmi ah munaasabad ka dhacday dalka. Ma noqon doonto wax aan caadi ahayn in summaddu ay yeelato dhacdooyin badan oo laga qorsheeyo Yurub, suurtogalna tahay mid ka dhacda Spain muddo yar ka dib.
Faahfaahinta ku saabsan qalabkan ayaa noo imanaya, taas oo muujineysa inay noqon doonto mid ka mid ah xulashooyinka ugu dhameystiran ee heerka dhexe. Taleefan in ayaa u muuqan doonta kaamirooyinkeeda, taas oo shaki la'aan noqon doonta cunsur fure u ah. Waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa baytari weyn.
Xiaomi Mi Note 10 waxay umuuqataa inay socoto noqo nooc caalami ah CC9 Pro. Maaddaama qeexitaanadooda ay isku soo beegmayaan, gaar ahaan faahfaahinta kamaradaha ayaa isku mid ka ah kiiskan. Laakiin shirkadda lafteedu waxba kamay xaqiijin kiiskan, in kasta oo wax waliba soo jeedinayaan in arrintu sidaas noqon doonto.
Waxaan rajeyneynaa inaan helno xog dhowaan dhacdooyinka kale ee ka dhici kara Yurub kaas oo lagu soo bandhigi doono Xiaomi Mi Note 10 Tan iyo markii aysan la yaab lahayn in shirkaddu ay abaabusho dhacdo kale oo ka dhacda Yurub, waddan sida Spain ah. Marka waan arki doonaa haddii war jiro goor dhow. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay umuuqataa in labo usbuuc kadib aan awoodi doono inaan ogaano taleefankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi Note 10 horeyba wuxuu u lahaa taariikhda imaatinka Yurub